လက်စွဲထွင်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / လက်စွဲထွင်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-06 မူလ:ဆိုက်ကို
လက်-သုံးကားedမြင့်မားသောပရိဘောဂများ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ လက်ဖြင့်ထွင်းထားသောလက်မှုပစ္စည်းများသည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်သဘာဝခါးဆစ်များရှိသည်,အားဖြင့် unmatched သောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးပုံစံများWoodworking ပါဝါကိရိယာများထွင်းထု။ အဆင့်မြင့်လက်ထွင်းထုခြင်းသည်အလွန်မြင့်မားသောပညာရှင်များလိုအပ်သည်။ လက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောအလုပ်တိုင်းသည်ထူးခြားသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်သမားများ၏ကမ္ဘာနှင့်ဘဝနှင့်အသက်တာကိုအလုပ်မှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ထွင်းထုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်လိမ့်မည်။
ရုရှားမှတင်သွင်းသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောဘုစပတ်သည်ထွင်းရန်အတွက်သင့်တော်သောသစ်သားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုရှားဘရူးတွင်သိသာထင်ရှားသည့်နှစ်ပတ်လည်ကွင်းများ, ဖြောင့်မတ်သောအရောင်တင်ခြင်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရောင်တင်ခြင်း,သင့်လျော်သောအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ.
2 ။Dသစ်သား rying
လတ်ဆတ်သောသစ်သားထဲတွင်အစိုဓာတ်ကိုအငွေ့ပျံနေပါက၎င်းသည်ရေစက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည့်ကျုံ့ခြင်း, ထို့ကြောင့်သစ်သားကိုအတင်းအဓမ္မခြောက်သွေ့စေရမည်အသုံးပြုခြင်းလျှပ်စစ်သစ်သားထွင်းထုကိရိယာများသို့မ်ဆေးeအမျိုးမျိုးသောသစ်သားထုတ်ကုန်။ သင့်လျော်သောခြောက်သွေ့သောကုသမှုသည်အထက်ဖော်ပြပါသစ်သားချို့ယွင်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးသစ်သား၏စက်ရုပ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
ဉီးစွာသုံးပြီးလက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများသစ်သားတစ်ဒါဇင်ကျော်ကိုသစ်သားဖြင့်ဖြတ်သန်းရမည်။ရည်ရွယ်ချက်များသစ်သားပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လမ်းခင်းရန်လမ်းခင်းရန်။ ဤအဆင့်တွင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအမှားတိုင်းတွင်အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး link တိုင်းတွင်အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နည်းပညာအဆင့်ကိုအလွန်အမင်းစစ်ဆေးသည်။နှင့်အလုပ်သမားများ၏ခံနိုင်ရည်ထို့အပြင်၏အရေးကြီးသောအကောင်းဆုံး Woodworking ကိရိယာများ.
ကားပုံလိုင်းများထွင်းထုသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အညီ, သစ်သားပေါ်ရှိအခြေခံဂျုံကိုပြသသောသော့ချက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။သုံးပြီးငါ့အနီးရှိသစ်သားကိရိယာများသို့သုံးကားeဒီကောက်ပဲသီးနှံအရ workpiece ကို process ပါလိမ့်မယ်။
5 ။Cချောချောမွေ့မွေ့သေချာစေရန်အလယ်တန်း polishing ထွက် arry
ကြိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအလွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သံချေး, ရေပေါ်သံချေးရောင်, ရေနံအစွန်းအထင်းများနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းသောingကြမ်းသောအပေါ်ယံအပေါ်ကြမ်းအမှုန်နှင့်အညစ်အကြေးများဖြစ်ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ရရှိရန်, ချောမွေ့သောဖုံးအုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုကြမ်းတမ်းသောကော်ကိုတိုးမြှင့်စေရန်အပြင်းအထန်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုသို့ပွတ်တိုက်သင့်သည်သင့်လျော်သောအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်Mini Rotary Grinder.
6 ။သင့်အောင်လုပ်အဆိုပါသန္ဓေသားနှင့်အနီးစပ်ဆုံးပုံသဏ္ tarve နာ
ညှိခြင်းသန္ဓေသားသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်ညှိခြင်းအဆိုပါသန္ဓေသားသည်မလိုအပ်ပါသုံးပြီးRotary Tool Kitသို့ပြန်လည်eSetting အတွက်မလိုအပ်သောသစ်သားအမြောက်အများရှိသော်လည်း Setting တွင်အလွန်မြင့်မားသောဗေဒသဘောထားကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်နည်းပညာနှင့်အလုပ်သမားများအားတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိုးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
7 ။SAnding, အသေးစိတ်ကိုပျော့ပြောင်းပြီး
Sanding သည်သစ်သားမျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့စေပြီးမျက်နှာပြင်၏စွမ်းအားကိုတိုးစေသည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်Mini Rotary Sanderသစ်သားအထူများသည်ယူနီဖောင်းဆန်ဆန်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်ထွင်းထုထားသောအလုပ်များအတွက်သင့်တော်နိုင်ပြီးအလှဆင်ခြင်းနှင့်ပရိဘောဂများပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
သင်အရွက်ကို ထွင်း. radians ထွင်းထုသည့်အခါမည်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုမည်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်Rotary tool ကိုသတ်မှတ်အလွန်အထူးသဖြင့် radians ကွဲပြားခြားနားသော radians များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား sizes ။
Woodworking ပါဝါကိရိယာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ Dremel လျှပ်စစ်ထင်းသစ်သားထင်းကိရိယာများ လျှပ်စစ်သစ်သားထွင်းထုကိရိယာများ လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ Dremel လက် Windworking Tools များ အကောင်းဆုံး Woodworking ကိရိယာများ ငါ့အနီးရှိသစ်သားကိရိယာများ Mini Rotary Grinder Dremel Rotary Tool Kit